I-anchor ephezulu yentsimbi engaphantsi kwesiseko se-marble granite fixing system yomvelisi kunye nefektri | Ubulumko
• Ukufakwa ngokukhawuleza nangokulula
• Umthamo omkhulu wokuthwala oomatshini
• Ukusebenza kakuhle kweenyikima
• Uluhlu olubanzi lweendawo zeankile yeplate
• Musa ukutshabalalisa umphezulu womhlaba
Isilumko esingaphantsi kwe-anchor bolts
Iimveliso ezixhasayo: ialuminium alloy pendant
Isangqa senziwe ngealuminium aluminium kwaye umphezulu unoksijini. Okwangoku, kukho izinto ezimile okwe-H, ezimilise indlebe, kunye nee-C-ezimile okwe-C, ukuze isinxibelelanisi sibambeke ngokuthe ngqo kwi-bolt yangasemva, kwaye ukufakelwa kunye nokubambelela kwesinxibelelanisi kunokugqitywa ngaxeshanye. Kwangelo xesha, umgama phakathi kwesiqwengana sokudibanisa kunye ne-keel ephambili unokuhlengahlengiswa, onokuthi unyuse isantya sokwakha kwaye uqonde ukufakwa kwemodyuli, ekulungele ngakumbi ukutshintshwa kunye nokugcinwa.
Inomzimba wealuminium alloy, imitya emibini yenayiloni (imitya yerabha), kunye nezikrelemu ezimbini zokuhlengahlengisa. Ihlala isetyenziselwa ukuxhoma ilitye elomileyo kunye neepleyiti zeceramic.
Iqulethwe ngumzimba ophambili wealuminium, iziqwenga zenylon ezintathu (iziqwenga zerabha) kunye nezilungiso ezihlengahlengisiweyo, ezifanelekileyo ukuxhoma owomileyo amatye ubukhulu kunye neepleyiti zeceramic.
Yenziwe ngamalungu amabini e-aluminium alloy kunye nezilungiso zokuhlengahlengisa, ilungele ukuxhoma owomileyo amatye kunye neepleyiti zeceramic zobukhulu obahlukeneyo.
Egqithileyo Isilumko-seSithathu seSiseko se-Anchor engaphantsi
Okulandelayo: Isitishi seAnchor
iankile engaphantsi kwentsimbi